My World: နွေဦးကာလ မြူထသောခါ
Posted by PhyoPhyo at Monday, March 26, 2012 Labels: အထွေထွေမှတ်စု, နွေဦးကာလ မြူထသောခါ
ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး ငယ်ငယ်ကကျက်ခဲ့ရတဲ့ " နွေဦးကာလ မြူထသောခါ" ကဗျာကို ပြန်ရွတ်ရွတ်ကြည့်တာ
နွေဦးကာလ၊ မြူထသောခါ ရင်းထောင်ရင်းဆွဲ ဆောင်မြဲအိုးလွယ်ခါ ကနေမတက်တော့ဘူး။ မှတ်ဥာဏ်က အဲလိုကောင်းတာ၊ ကျက်ပြီး စာမေးပွဲတစ်ခုပြီး အကုန်မေ့ပစ်လိုက်တာပဲ။
မေမေ့ကို ရသေးလား မေးကြည့်တော့ ရတယ်တဲ့။ မေမေက သူပြန်ရေးပေးမယ်ဆိုလို့။ ခု ရလာပြီ။
နောက်မမေ့အောင် ဒီမှာ သိမ်းထားလိုက်တော့မယ်။
အခု အဲဒီကဗျာလေးကို ပြန်ဖတ်ချင်နေလို့။
အဲဒီကဗျာလေး ကျက်တုန်းက ပြီးလျင်ရေမရှာ ခွေးကိုသာကျွေးတော့သည် ဆိုလို့ နားမလည်ကြလို့၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ငြင်းခုံခဲ့ကြသေးတယ်။
ဆရာရှင်းပြတော့လည်းနားမလည်သေးဘူး။ အခုရော ........
ပုတတ်ကယ် ယုန်ခါ၊ တောမှာရှိကြ
တောသတ္တ၀ါ၊ တွေ့ တိုင်းကိုသာ
တံစို့ ထက်နှင့်၊ ထန်းလျက်ဖိုမှာကင်
ပြီးလျင်ရေမရှာ ခွေးကိုသာ ကျွေးတော့သည်။
အလုပ်ကယ်ဧရာသာ ငုံ့ ကာလွေးတော့သည်။
ဒီကဗျာလေးကို စကားပြေရေးခဲ့ရတာ မှတ်မိနေသေးတယ် မရေ။ သတိတရနဲ့ အမှတ်တရပြန်တင်ပေးထားတာ ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ။ အဲ..ကဗျာဖတ်တိုင်းလည်း ဗိုက်ဆာတယ်း))
ထန်းပင်လေးတွေ ပုံပါ ထည့်လိုက်ရင် သိပ်ကောင်းမှာ
ဒီကဗျာကို အမြဲတမ်း မှတ်မိနေတယ်
ဘာလို့ဆိုတော့ ကဗျာထဲက စရိုက်လေးတွေကို သဘောကျလို့လေ။
တကယ့်ကို မြန်မာအငွေ့အသက်နဲ့ ချစ်စရာကဗျာလေးနော်။
၀န်ကြီးပဒေသရာဇာဆိုတာ တကယ့်ကို ပြည်သူ့စာဆိုကြီးပေါ့ ဖြိုးဖြိုးရေ...လှေသမားဖွဲ့၊ ဆင်ဖမ်းသမားဖွဲ့၊ လယ်သမားဖွဲ့၊ ထန်းတက်သမားဖွဲ့စတဲ့ သာမန်ပြည်သူတွေရဲ့ ဘ၀တွေကို စာနာစိတ်အပြည့်နဲ့ ဖေးဖေးမမ၊ ချစ်စရာကောင်းအောင် ဖွဲ့တတ်တဲ့ လေးစားစရာ စာဆိုလို့ ဆိုရရင်လည်း မမှားပေဘူးပေါ့လေ...ချစ်ကြောင်း၊ ကြိုက်ကြောင်းတွေပဲ ရေးတတ်တဲ့ နတ်ရှင်နောင်တို့၊ န၀ဒေးတို့ လှိုင်ထိပ်ခေါင်တင်တို့ထက်တောင် ပိုပြီး လေးစားထိုက်တဲ့ စာဆိုကြီးပေါ့...
ဒီကဗျာမှာ ပြီးလျှင်ရေမရှာ ခွေးသာကျွေးတော့သည်ဆိုတာကို ဆရာတို့ အညာဒေသသားတွေမှပဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိနိုင်တာကလား...ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အညာမှာက ခွေးဆိုတာ အိမ်သားတစ်ယောက်လောက်အထိ တန်ဖိုးထားခံရတာကိုး...အိမ်ခြေငါးဆယ် ခွေးအကောင် တစ်ရာဆိုတာ အညာဓလေ့ပေါ့...
ဒါတင်မကသေးဘဲ ရေကလည်း အင်မတန်ရှားတာကလား...ထန်းတောဆိုတာ မိုးခေါင်ရေရှားဒေသမှာပဲ ပေါတာကိုး...ဒီတော့လည်း ရေရှားလွန်းလို့ ထမင်းစားတဲ့ ဒေါင်းလန်းကို ရေမဆေးဘဲ ခွေးကို အလျက်ခိုင်းလိုက်တဲ့ သဘောပေါ့လေ...ဆိုလိုတာက ခွေးကိုလည်း လူလိုပဲ တန်ဖိုးတားတဲ့ သဘောလည်းပါသေးတာပေါ့...ဒါတင်မကသေးဘဲ ထန်းတက်သမားရဲ့ လောကကို ဖြစ်သလို၊ ကျသလို နေမယ်ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့ ဘာမထီစရိုက်ကိုလည်း ထင်ဟပ်ချင်တဲ့ သဘောပေါ့လေ...
ကွန်မန့်တောင် တော်တော်ရှည်သွားတယ်...ဒါတောင်မှ ဒီကဗျာအကြောင်း ရှင်းစရာတွေမှာ တပုံကြီးကျန်သေးရဲ့...
I Like this Poem and thank for your
ဒဏ္ဍာရီထဲက တော်ဝင်တဲ့ ခရမ်းရောင်
လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ အီရန်ရဲ့ နျူကလီးယားအန္တရာယ်
အထိမခံတဲ့ ဟော်မုဇ် ရေလက်ကြား (သို့မဟုတ်) အီရန်ရဲ့ ...
The Lady ရဲ့ကြမ္မာ